Archive du 07-déc-2021
Kely tsy mba mamindro
Mihanjahanja tsy misy mpiahy ny vahoaka madinika ankehitriny. Ny lehibe natao handrapaka ny kely, raha tarafina amin’ny ataon’ny orinasa karana sy ny Malagasy mahitahita amin’ny madinika.
Fifaninana « Miss et Mister 2021 » Anisan’ny hiatrika famaranana i Princia Rakoto
Tamin'ny 25 novambra 2021 teo no nanomboka nihidy tao amin'ny Villa eto an-drenivohitra ireo solontena isaky ny Faritra 23 amin'ny fifaninanana Miss et Mister Madagascar 2021 ka isan'izany i Princia Rakoto,
Sakafo voalanjalanja sy tsara karakara Manatsara ny saina sy antoky ny fahasalaman’ny vatana
Ny 42%-n’ireo ankizy latsaky ny 5 taona eto amintsika no mbola miaina ao anatin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka.
Kaominina Faratsiho Mikatso ny asa, tsy misy fampandrosoana
Tsy mbola misy Ben’ny tanana voafidim-bahoaka mitantana ny kaominina Faratsiho hatreto. Ben’ny tanàna mpisolo toerana no miezaka mampandeha ny raharaha ao an-toerana,
Hivalona indray ny 2021 Tsy mety teraka ny orinasa Gascar, ozinina ethanol
Mivalombalona ny volana sy ny taona, fa mbola tsy hita misongasonga kosa ny taratr’ireo tetikasa sasany nanaovana kisehoseho goavana teto Madagasikara.
Fiara 4x4 very teny Imerinkasinina Tany Ambohidratrimo no hitan’ny zandary
Saron'ny zandary avy ao Ambohidratrimo tao Antanjondroa kaominina Iarinarivo, distrika Ambohidratrimo, ny harivan'ny alahady 5 desambra 2021 ilay fiara voatafika sy nalain'ny jiolahy an-keriny teny Imerikasinina Avaradrano
Parlemantera TIM “Mila fantatra ny tompon’andraikitra nanodinkodim-bola”
Misy tsy araka ny tokony ho izy ny asan’ny mpanatanteraka eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny parlemantera Tiako I Madagasikara na TIM, ny depiote Fetra Ralambozafimbololona.
Olona voan’ny SIDA Voahilikiliky ny namany sy ny orinasa sasany
Ny 0,28%-n’ny mponina eto Madagasikara no fantatra fa tratry ny areti-mandoza SIDA. Miisa 8000 izy ireo ka ny 7400 no fantatra fa efa manaraka fitsaboana ara-dalana.
Rocade d’Iarivo Nahazo foto-drafitrasa maro ny mponina
Mbola nisy ambiny ny vola nanamboarana ny lalana Rocade d’Iarivo novatsian’ny vondrona Eoropeana vola.
Tovo J’Hay Hanolotra seho ho fanarenana ny “Trano Anketsa”
Etsy amin’ny Saint Michel Amparibe Jacaranda no fotoana miaraka amin’i Tovo J’Hay ny alahady 12 desambra izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro.
Ampasika Mpanendaka roalahy tratra tany an’elakelantrano
Lehilahy miisa roa 23 taona sy 32 taona no tratran’ny Polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny Boriborintany fahafito teny an’elakelantranon’Ampasika ny 05 desambra lasa teo,